वीरगन्जका भन्सारले तीन महिनामै संकलन गरे ६८ अर्ब बढी राजस्व- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
पर्सा — वीरगन्जस्थित २ भन्सार कार्यालयले चालु आवको त्रैमासिक अवधिमा ६८ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गरेका छन् ।
कोरोना कहरपछि आयात निर्यात व्यापार पुरानै लयमा फर्किन नसकेको अवस्था बीच पनि मुलुकको प्रमुख स्थल नाकास्थित वीरगन्ज र सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहले गरी यति परिमाणमा राजस्व संकलन गरेका हुन् ।
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकले आगन्तुक रिसोर्टमा छुट पाउने
काठमाडौँ — सिटिजन्स बैंकका ग्राहकले बनेपास्थित आगन्तुक रिसोर्टमा छुट पाउने भएका छन् ।
बैंक र रिसोर्टबीच एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सम्झौताअनुसार सिटिजन्स बैंकका मोबाइल बैकिङ्ग ग्राहक, डेबिट/क्रेडिट कार्डवाहक तथा कर्मचारीले रिसोर्टमा छुट पाउनेछन् ।
बैंकले घरमै बसी नि:शुल्क मोबाइल बैकिङ्गमार्फत डेबिट कार्डको लागि आवेदन दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । मोबाइल बैकिङ्गमार्फत खानेपानी, विजुली तथा इन्टरनेटको बिल भुक्तानी, प्रिपेड तथा पोष्टपेड मोबाइल बिल भुक्तानी र मुद्दती खाताको आवेदन दिन सक्ने लगायतका व्यवस्था समेत बैंकले गरेको छ ।
बैंकले देशभरका १८३ वटा शाखा, १२१ वटा ए.टि.एम. र १११ वटा शाखा रहित बैंकिङ इकाईबाट करिव साढे १२ लाख ग्राहकलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।
प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७८ १८:३३
सेयर कारोबार घटेको घट्यै
नाफा बढे पनि बैंकहरूको प्रतिसेयर आम्दानी घट्यो, कुनको कति ?
निर्माण सकेर टेको झिक्नेबित्तिकै लच्कियो पुल